Kuratidza zvinyorwa neelebheri Viola
Violik kana Elbe Shield (Polish Łabski Szczyt, veGerman Veilchensteine ​​kana Veilchenspitze), igomo riri muSilesian Ridge muGiant Mountain, pamuganho weCzech Republic nePoland. Iyo ipapa yakavezwa-yakavezwa nehuku padenga pamusoro wayo. Iro gomo riri 1 km kuchamhembe kweLabská bouda, 5,5 km kuchamhembe kweDolní Mísečky uye 6 km kubva kuPoland Piechowice.
Pamawere eViolík kune nzvimbo dzakadzika uye nematombo emakungwa. Chinhu chikuru chemitambo yemusangano, zvisinei, ndiyo inonhuwa tsvimbo, munzvimbo dzakaderera ipapo inokura ibvi. Nechekumaodzanyemba kwakadziva kumadokero, padiki kwemakiromita kubva pamusangano, pane Elbe Meadow, panobuda rwizi rweElbe.
Iwe unogona kusvika summit pane yakatsvuka-yakarongedzwa gidhi nzira yeCzech -Polish hushamwari. Inopfuura nepamatombo epamusoro kubva parutivi rwekumaodzanyemba pane chinhambwe chemamita anenge 40. Iro dombo iro pacharo riri munzvimbo ye1 yekutanga yeGiant Mountain National Park uye saka haigone kusvika kune vashanyi. Kubva pamusoro wepamusoro pane iwo maonero akanaka eiyo Giant Makomo, Jizera Makomo uye Jeleniogórska Basin.